Manameloka ny tsy fanarahan-dalàna any Afrika atsimo ny Birao fizahantany afrikanina
Home » Lahatsoratra farany farany » Birao fizahantany afrikanina » Manameloka ny tsy fanarahan-dalàna any Afrika atsimo ny Birao fizahantany afrikanina
Birao fizahantany afrikanina • Vaovao Mafana Afrika Atsimo • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Kolontsaina • Vaovaom-panjakana • fampiasam-bola • Vaovao • People • fanorenana • Tourism • Dinika fizahan-tany • Fanavaozana ny tanjon'ny dia • Travel Wire News • Vaovao isan-karazany
Cuthbert Ncube no filohan'ny birao fizahan-tany afrikanina
Ny toe-javatra misy ankehitriny any amin'ny Repoblikan'i Afrika Atsimo dia mikasika izany. Ny herisetra ratsy indrindra nandritra ny taona maro dia nipoaka taorian'ny fanagadrana ny filoha RSA teo aloha Zuma.
Ny hatezerana amin'ny tsy fitoviana aorian'ny apartheid dia miteraka korontana. Miketrika ny mponina hiarovana fananana, hifanandrina amin'ireo mpandroba
Ny fiadidian'i Afrika Atsimo dia mihevitra ny fametrahana miaramila bebe kokoa. Ny filohan'ny Birao Afrikana momba ny fizahantany dia namoaka fanambarana.
Cuthbert Ncube, ny filoham-pirenena afrikanina atsimo ao amin'ny Birao fizahan-tany momba ny fizahantany dia mangataka fitoniana amin'ny fifanolanana sy herisetra mitohy manerana ny Repoblikan'i Afrika Atsimo.
Loza ho an'ny Travel, fizahan-tany ary fampiasam-bola amin'ity faritra ity ny korontana ara-tsosialy sy ara-politika satria KZN no mpizahatany voalohany ary toeram-pampiasam-bola any Afrika Atsimo, ary ivon'ny hetsika, kolontsaina ary fihaonambe.
Miezaka ny hamoaka olana amin'ny fandrobana raharaha ny media ary ny tena marina dia manimba firenena efa mahantra ny fanidiana azy. Ny tompona orinasam-pizahantany any Etazonia sy mpikambana iray ao amin'ny Birao Afrikana momba ny fizahantany dia nilaza hoe: II dia nanombantombana izay hataon'ny areti-mandringana amin'ireo fiarahamonina miankina amin'ny fizahan-tany. Tsy nieritreritra an'i Afrika atsimo aho tamin'io lisitra io. Tsy fantatro fa niankina tamin'ny fizahan-tany toa azy i Afrika Atsimo.
Ny fanontaniana napetraka tany Afrika atsimo: mety tsy ho tompon'andraikitra intsony ny filoha teo aloha Jacob Zuma. Sa misy olona? Ny valiny: Tsy misy olona manome vola ho an'ny tenany ho an'ny tenany.
Nilaza ny masoivohon'ny dia iray any Johannesburg eTurboNews: Niezaka nanangana fitsangatsanganana fizahantany tany Afrika Atsimo indray aho saingy nisy ny COVID, ary korontana izao…. tsy fantatrao hoe rahoviana isika no hiverina.
Ny filohan'ny komity fizahan-tany afrikanina any Eswatini, Cuthbert Ncube, dia monina any Pretoria, Afrika Atsimo. Nanampy izy hoe:
“Ny Birao Afrikana misahana ny fizahan-tany dia manameloka ny tsy fanarahan-dalàna sy ny herisetra tonga nanerana ny faritanin'i KwaZulu-Natal (KZN) any Afrika atsimo ary nitatra tamin'ny faritra hafa ao amin'ny firenena.
Mijoroa ho an'i Afrika Atsimo
“Ny fizahantany dia mety ho motera fanarenana ara-toekarena sy famatsiam-bola.
Izahay, noho izany, dia miantso fitoniana sy fifehezana ny olom-pirenena rehetra ary ny mpitondra politika
“Aleo mamorona fifanakalozan-kevitra ary hamaha ireo olana lehibe.
"Ny fiverenan'ny tranga COVID taorian'ny fika hafa iray izay naka am-paosin'i Afrika dia niteraka fahatairana iray hafa ho an'ny indostrian'ny Travel.
“Ny fikomiana tsy ilaina toy izany dia tsy hamonjy ny fitoniana sy ny lazan'i Afrika atsimo sy ny kaontinanta mitambatra.
“Rehefa matoky ny rafitra ireo mpamatsy vola, mpivahiny, orinasa vao manomboka miverina sy miroborobo indray ity sehatra ity.
Andao isika rehetra hamerina ny avonavon'ny kaontinanta, Afrika atsimo, sy ireo faritany ao aminy ho toerana voalohany tian'ny safidy Fizahantany, MICE, Fampiasam-bola ary fialan-tsasatry ny fianakaviana. "
Ny iraka ataon'ny Birao fizahantany afrikanina dia ny hahatongavan'i Afrika ho toerana fizahan-tany safidy eto amin'izao tontolo izao. Ireo masoivoho misahana ny fizahan-tany afrikanina dia mitarika ny fikambanana manerana ny kaontinanta. Ny foiben-toeran'ny ATB dia ao amin'ny Fanjakan'ny Eswatini. Ny orinasa fivarotana fizahantany afrikanina dia manana foibe any Etazonia. Fampahalalana bebe kokoa sy endrika fisoratana anarana ho mpikambana www.africantourismboard.com